नियुक्त भएको २४ घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे यस्तो निर्णय — Imandarmedia.com
नियुक्त भएको २४ घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे यस्तो निर्णय
काठमाडाैँ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २४ घण्टा नबित्दै गण्डकी प्रदेशका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । आइतबार विहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
षद बैठकले संघको सुविधा समेत हरेर पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा तोक्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारको प्रवक्तामा विनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्कालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘के कस्तो सुविद्या दिने भन्ने अहिले नै निर्णय भएको छैन । तर उहाँहरुको पदीय जिम्मेवारी अनुसारको उचित सम्मान हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘त्यसका लागि अब, हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर सेवा सुबिधा तोक्ने तयारी गर्ने छौं ।’
प्रवक्ता खड्काले सरकारले छिट्टै नै विश्वासको मत लिने तयारी थालेको बताए । विश्वासको मत नलिइकन सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दा प्रश्न समेत उठ्ने भएकाले सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिने उनले बताए । प्रवक्ता खड्काले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अर्थमन्त्रीको सल्लाहमा बजेट ल्याउने पनि बताए ।
पोखरेल २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश अन्तरगतको नवलपरासी पूर्व (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रजातन्त्र सेनानी गोवर्द्धन शर्माका छोरा पोखरेल हाल ​७१ वर्ष पुगेका छन् । पोखरेल २००६ साल मंसिर १३ गते तनहुँको तनहुँसुरमा जन्मेका हुन् ।
शर्माले लामो समय शिक्षण पेशामा समेत समय व्यतित गरेका छन् । उनले काभ्रेको फलानटे, तनहुँको दमौली र तनहुँको थर्पुका हाइस्कुलमा राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास पढाए । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्षमा प्रचार गरेर नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले जुम्ला सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०३६ सालमा पञ्चायती दमन र शारीरिक यातनापछि बाध्य भएर उनले शिक्षण पेसा छोडे । यसरी उनले लामो समय नेपाली राजनीतिमा खर्चेका छन् । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भइ पोखरेल मुख्यमन्त्री भए ।
यस्तै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’बाट आफू धोकामा परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आइतबार आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले मनाङले आफूलाई ‘धोका’ दिएको दिएको बताएका हुन् ।
गुरुङलाई आफूले चुनाव जिताएको, प्रदेशसभा सदस्यको सपथ दिलाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले भने, ‘सबै छोड्छु, राजनीति र समाजसेवा गर्छु, सुध्रिन्छु भनेपछि मैले नै सघाएको हो । तर, सबै डाँकूहरु वाल्मिकी नहुँदा रहेछन् ।’
यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रत्नाकर डाकुसमेत बाल्मिकी बनेकाले कसैको विगत हेरेर सधैँ त्यही मूल्यांकन गर्न नहुने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनेका दीपक मनाङेले डा. भट्टराईसँग भेट गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै उनले उक्त भेटबारे प्रदेशसभा सदस्य मनाङेसँगको भेटलाई अन्यथा मान्नु नहुने बताएका छन् । डा. भट्टराईले रत्नाकर वाल्मिकी बनेको उदाहरण दिदैँ मनाङेले नयाँ जीवन र नयाँ भूमिका चाहेमा वञ्चित गर्नु वा पूर्वाग्रह राख्न नहुने जनाएका छन् ।
जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गरिसकेकाले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले उनलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको थियो । अघिल्लोपल्टको कारबाहीको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो ।
महन्थ पक्षधर सांसद नै नभएको गण्डकीमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य शंकर गौतम र प्रदेश संयोजक अनिल परियारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्ना सांसदको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए । स्वयं गौतमले उक्त पत्र पठाएको पुष्टि गरे । जबकि जसपाका दुई सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामाले शुक्रबारै विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबारदेखि नै पोखराको एक रिसोर्टमा बसेका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि गठबन्धनलाई साथ दिएर सँगै थिए । मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको दाबीले विपक्षी गठबन्धन सशंकित बन्यो ।
काठमाडौंमै जस्तो राजनीतिक दाउपेच गण्डकीमा दोहोरिएको र संसद् भंग गर्ने योजना भएको गठबन्धनले ठम्यायो । समयसीमा सकिएपछि पनि बोलावट नभएकाले ३१ सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भए । धर्ना बसे । गठबन्धननिकट कार्यकर्ता केहीबेर प्रदर्शनमै उत्रिएर नाराबाजी गरे ।
कांग्रेसबाट पहिलोपल्ट नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको गण्डकी पहिलो हो । नेकपाको फुटले नेपालीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । उनी तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि वैशाख २ मा उनलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै विपक्षी ४ दलको गठबन्धनले गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
वैशाख १५ मा मतदान हुने दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि संसद् बैठक अन्त्य गरे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा आयो । तीन दिनभित्र बहुमतसहित दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि पुनः नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै विपक्षी गठबन्धनले चार दलको पत्र बुझाएको थियो । त्यतिबेलासमेत जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो दलको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि पुनः गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
विपक्षीले बहुमत प्रस्तुत गरिसकेकाले गुरुङको सहज बहिर्गमन एमालेभित्रैका सांसदले चाहेका थिए । गुरुङले शनिबार दाबी प्रस्तुत गरेपछि उनकै पार्टीका सांसद रुष्ट बने । एमाले सांसद इन्द्रलाल सापकोटा, रोशनबहादुर गाहा थापा, मीनप्रसाद गुरुङ र महेन्द्र थकाली गुरुङलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे ।
उनीहरूको नेतृत्व माधव नेपालपक्षीय सांसद सापकोटाले गरे । उनले छलफल गरेको स्थलबाटै गुरुङलाई फोन गरेर विधिविपरीत गएर राजनीतिलाई नधमिल्याउन आग्रह गरे । प्रदेशसभा विघटनको खेल भएको खण्डमा पार्टीबाटै विद्रोह गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिए ।
‘हामीले विश्वासको मतमा सहयोग गरेकै हौं, विश्वासको मत दिँदा गरेको हस्ताक्षर सबै कामका लागि ल्याप्चे होइन,’ उनले भने, ‘कुनै हालतमा प्रदेशसभा विघटन हुनुहुँदैन भनेर उहाँको दाबीमा पूर्ण असहमति जाहेर गर्यौं ।’ त्यसपछि गुरुङ हच्किए । गुरुङले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई फोन गरी संविधानअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गरेकी हुन् । गुरुङले शनिबार नै नेपालीलाई फोन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा बधाईसमेत दिए ।नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र ४ मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएकी हुन् ।
शपथ लिनेमा मुख्यमन्त्री नेपाली, मन्त्रीहरूमा कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । मन्त्रीहरूले बिनाविभागीय रूपमा शपथ लिएका हुन् । मनाङे यसअघिको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि नेपालीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रदेशवासीको हकहितका लागि सदैव प्रयत्नशील रहने भन्दै पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप नै हुने बताए । मुख्यमन्त्री नेपालीले पदभार ग्रहण गर्दै विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने र महिलाको स्तन, पाठेघरको मुख र पाठेघर क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् ।